Kirsten Baete nke Nebraska nwetara akwụkwọ ịkpọ òkù ụmụ nwanyị White Sands Bahamas NCAA
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Kirsten Baete nke Nebraska nwetara akwụkwọ ịkpọ òkù ụmụ nwanyị White Sands Bahamas NCAA
Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Egwuregwu • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
White Sands Bahamas NCAA òkù
Onye isi afọ ise Kirsten Baete nke Nebraska gbara agba nke ikpeazụ ọbụna-par 72 na Sọnde ka ọ kwụgidere maka mmeri waya na waya na òkù nke abụọ nke White Sands Bahamas NCAA òkù. Mmeri ahụ, site n'otu strok meriri Emily Hawkins nke Campbell, bụ ọrụ Baete mbụ.
Campbell, onye NCAA Regional qualifier na mbido afọ a, meriri aha otu ahụ, jiri ọkpụ anọ meri ndị Cornhuskers.
Akwụkwọ ịkpọ òkù White Sands Bahamas NCAA a ma ama, na-egosipụta ụfọdụ ndị otu egwuregwu gọlfụ kacha elu na United States, na-aga n'ihu n'izu a na nkuzi Golf Ocean Club.
Ndị na-esote bụ ndị otu nwoke iri na abụọ n'izu a na Ocean Club Golf Course.
Baete kwụsịrị na 10-n'okpuru 206, ebe Hawkins gbapụrụ 7-under-par 65 ka ọ biputere 207 na Ocean Club Golf Course na Atlantis Resort. Mikayla Dubnik nke Mercer bụ nke atọ na 68-211.
N'ịbụ ndị egwuregwu atọ gwụchara n'etiti ndị isi-10, Campbell, onye NCAA Regional qualifier na mbido afọ a, meriri aha otu, na-eti Cornhuskers site na strok anọ, ebe Mahadum Miami kwadoro nke atọ.
"Achọrọ m ịkele onye ọ bụla nọ na nkuzi - onye nlekọta, ụlọ ahịa pro; Usoro ahụ dị n'ụdị dị ịtụnanya nke ukwuu, "Baete kwuru mgbe o bipụsịrị akara ọrụ ya dị ala na ọrụ nke anọ kachasị elu-10. "Ọ mara mma ma na-ewepụta usoro ọmụmụ ọkacha mmasị m ọhụrụ."
"Nke a bụ mmeri mbụ Kirstin nwetara, yabụ anyị nwere oke obi ụtọ maka ya inweta [mmeri] n'okpuru eriri ya," onye nkuzi Nebraska Lisa Johnson kwuru. "Ọ rụsiri ọrụ ike n'ime afọ ise ya na Nebraska, ọ bụkwa nnukwu onye na-eme egwuregwu na onye na-enye ọzụzụ na ọ bụ ihe magburu onwe ya ịnweta mmeri a ma na-anọchite anya ndị Huskers."
Campbell biputere ngụkọta nke ọkpụkpọ anọ nke 10-n'okpuru 854 karịa oghere 54 na Hawkins na Anna Nordfors na-eduga ụzọ. Nordfors, nke nwere agba ikpeazụ 72, mechara nke anọ n'otu n'otu yana ngụkọta 4-n'okpuru 212. Tomita Arejola gbara afọ irith ya na 69-217 ebe Patricia Garre Munoz gbakwunyere 226.
"Nke a abụrụla ihe pụrụ iche ma bụrụkwa izu zuru oke maka anyị," onye nchịkwa Campbell John Crooks kwuru. "Ndị otu a mere ihe dị mkpa na Emily Hawkins gbara 65 taa na nke ahụ mara mma pụrụ iche. Onye ọ bụla n'ime otu ahụ agbapụla n'okpuru ọkwa mbụ wee nyere Campbell aka n'oge a. "
"Ekele m nke ọma na Kirsten Baete na ndị niile sonyere na mbipụta ụmụ nwanyị nke White Sands Bahamas NCAA òkù," ka osote Prime Minister The Honorable I. Chester Cooper, Bahamas Minister of Tourism, Investments & Aviation kwuru. "Ndị Bahamas nwere ọdịnala dị ogologo nke ịdọta ndị gọọmenti si n'akụkụ ụwa niile ka ha nweta ọzụzụ gọọlfụ nke ụwa anyị, anyị na-atụkwa anya na mgbe ndị otu Mahadum nọ ebe a, ha na-ekpori ndụ n'àgwàetiti anyị mara mma, na na na golf."
Ndị otu ikpeazụ nwetara akara: Campbell 854, Nebraska 858, Miami 862, Mercer 870, Florida International 900, Northern Illinois 905, Iowa 908.
Ndi ugwu White Sands Bahamas NCAA òkù, na-egosipụta ụfọdụ n'ime ndị otu egwuregwu gọọlfụ kacha elu na United States, na-aga n'ihu n'izu a na Ocean Club Golf Course na asọmpi ụmụ nwoke na-egosi ụlọ akwụkwọ 12, gụnyere University University nke Arkansas na Little Rock. Na-esochi usoro omume ụbọchị abụọ malite na Wednesde, asọmpi oghere 54 na-amalite na Fraịde, Ọkt. 29 na nkuzi 7,159-yard Ocean Club.
Na mgbakwunye na Little Rock, ndị otu ndị ọzọ na-asọmpi na ihe omume ahụ gụnyere Bowling Green State University, East Tennessee State University, Florida Atlantic University, Florida Gulf Coast University, Jacksonville University, Lamar University, Lipscomb University, University of Michigan, University of Mississippi, University nke San Francisco na Mahadum South Florida.
Mahadum Houston meriri mmemme mmeghe na 2019 yana mmadụ anọ nwere ngụkọta nke 833.
Usoro ihe omume maka òkù White Sands Bahamas NCAA nke ụmụ nwoke na-abịa:
Tọzdee, Ọktoba 28: Gburugburu Omume Otu
N'ihe karịrị agwaetiti 700 na cays na ebe agwaetiti 16 pụrụ iche, Bahamas dị naanị kilomita 50 site n'ụsọ oké osimiri Florida, na-enye ụzọ mgbapụ dị mfe ijiji na-ebuga ndị njem na-apụ kwa ụbọchị. Àgwàetiti Bahamas nwere ịkụ azụ̀, ịgba mmiri, ịkwọ ụgbọ mmiri, na ọtụtụ puku kilomita nke mmiri na ụsọ mmiri kasị dị egwu n'ụwa na-echere ezinụlọ, ndị di na nwunye, na ndị njem. Chọgharịa n'agwaetiti niile ị ga-enye na www.bahamas.com ma ọ bụ na Facebook, YouTube, ma ọ bụ Instagram ka ịhụ ihe kpatara na ọ dị mma na Bahamas.